Nhọrọ maka ịhọrọ ngwọta GIS / CAD - Geofumadas
Julaị, 2008 ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, GvSIG, IntelliCAD, manifold GIS, Microstation-Bentley
Taa bu ubochi nke m kwekorita ka m kpughee ihe omuma nke ala di na Bolivia. Ejikọta isiokwu a na ngosipụta nke otu esi ahọrọ ngwá ọrụ kọmputa maka mmepe ọdịdị.
Nke a bụ ihe ngosi m ji mee ihe, m na-elekwasị anya bụ nyocha nke ihe omimi nke anyị na-atụ anya imezu ngwọta ahụ.
Ihe iseokwu a bụ na ọ bụrụ na ịchọrọ ịhọrọ ngwá ọrụ dị mfe iji weghachite data ị ga-atụle akụkụ ndị na-enweghị ihe ọ bụla iji mee naanị na ike ịmepụta vectors, ma kama nkwado nke a pụrụ akwado dị ka ndị ọrụ chọrọ. ha na-enweta ya site na ọkwa dị iche iche na ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ ga-achọ ikikere.
N'ime ụfọdụ njirisi anyị tụlere, na ịdị arọ ya nwere ike ịdịgasị iche na-adabere na obodo a ma ọ bụ akụkụ ya, n'etiti ndị ọzọ nwere ike nyochaa:
Speed ​​vrs. Ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ
Ọdịdị na-agbanwe agbanwe
Nweta mmemme mmemme (API)
Ego zuru oke
Mgbe ahụ, anyị kewara ọdịiche dị na geomatic n'ime ọ dịkarịa ala atọ isii ma tụọ ọkwa dị mkpa nke ọkwa ndị dị na oge dị iche iche. Enwere ike ịhọrọ mpaghara nke ọhụụ nke atụmatụ ndị ọkachamara ma ọ bụ ndị ọkachamara kwadoro, a na-enyekwa ha ihe dị arọ iji nyochaa n'ụzọ dị mma uru na ọghọm nke ngwọta dị iche iche:
1 Ihe owuwu
Na nke a, a na-atụ anya na ngwọta dị irè ma dị irè maka mmepụta na ndị dị elu site na ndị ọrụ ntanetị nke si n'ọhịa, nyochaa, dị ọcha, jikọta data ma jikọta ihe oyiyi ma ọ bụ ọrụ ntanetị.
2 Nlekọta nlekọta
Na nke a, a na-atụle ya, na e mepụtara data nwere ike idebe ụkpụrụ dị ka ịnakwere n'ime nchekwa data ma ọ bụ onye njikwa faili. Akụkụ ndị dị ka ndabere usoro na API dịnụ dị ezigbo mkpa. Ma, n'ezie, ngwọta ndị a na-achọ na ọkwa a maka njikwa nchekwa data ga-enwe ezigbo arụmọrụ maka ọnọdụ multiuser na ike ịchekwa data data dị ka geometry na akara ngosi, kama inwe ihu ọma mara.
4 Ọkpụkpọ ngosi, na ọkwa a, a na-atụle ya na ngwugwu ngwugwu data nwere mgbanwe nke mgbanwe na ogc na ngwaọrụ ọrụ data nwere ọkwa nke personalization ka e wee nwee ike jikwa data rụọ ọrụ nakwa na ha na-elekwa anya mara mma.
5 Nhazi mmezi, nke a bụ ọkwa nke abụọ nke ihe eji arụ ọrụ, nke a na-atụ anya na akụrụngwa nwere nhọrọ iji nwee ike hazie nnweta ha maka ichekwa nsonaazụ ndị echepụtara, nchekwa nke akụkọ ihe mere eme na ọzọ, ọ ga-adịrị mfe. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume nhọrọ imepụta nkọwa eserese n'okpuru Activex na-arụ ọrụ n'ịntanetị ... ka mma.
6 Nkwado ndabere, Akpọwo m ya na, ma n'eziokwu, ọ bụ ebe a na-esi enweta ụlọ ọrụ, ebe ndị ọrụ n'ime ụlọ ọrụ na-enweta, gbanwee data, nkwado na ịmepụta ngwaahịa ọhụrụ. N'ebe a, ihe ndị a chọrọ n'aka CAD / GIS na-aga n'ihu na nhazi usoro na ike ịkwado versioning, ka ngwaọrụ ngwaọrụ, nke nwere ọtụtụ nnweta na mmepe, ụkpụrụ nchedo na ọrụ ndị ọrụ ntanetị.
3 Ụdị mgbanwe, nke a bụ ọkwa nke abụọ nke mbipụta ahụ, nke a na-atụ anya na ọ ga-eje ozi data na xml, gml ma ọ bụ usoro ndị ọzọ nke ụkpụrụ ogc kwadoro, ngwaahịa ndị anyị nwere olile anya ga-eji usoro geomatic ndị ọzọ ga-eji mee ihe mana na-alaghachi gbanwee. Ihe ị ga - ekwu, ikike ịgbaghari n'okpuru ụkpụrụ geofumated, gụnyere nhọrọ nke simplification vector ... ee, nke ọma geofumados.
Ọ bụ ezie na ụkpụrụ bụ itinye a ule nke e ji mara dị iche iche ihe ngwọta na onye ọ bụla na ogbo nke usoro, anyị ga-echefu ya dum onodu; otú anyị kwubiri na a ngwa ngwa mmega bụrụ na nke a bụ isi ahịa, dị ka ihe na ulo akwukwo nke ala a na mba, na ị chọrọ iji mejuputa a zuru usoro na gburugburu ebe obibi nke banyere 20 mmepụta technicians CAD / GIS, 3 mmepe, 75 ọrụ intranet na multiple online alo (anyị ahapụ ide-akwụ ụgwọ nke ihe Iha $ 30,000 afọ kwa processor, software mmepe, na mmejuputa iwu ìgwè):
Mee ya AutoDesk nwere ike ịkwụ ụgwọ $ 180,000Na-agaghị emeli na-adọ nke repositories na kwesịrị complemented ọzọ ụdị na arụmọrụ nke na kọmputa ego ha na-eje ozi data rụọ ọrụ nke ọma n'okpuru elu mgbaru ọsọ ma na postprocessing.
Mee ya Bentley nwere ike ịkwụ ụgwọ ruo $ 210,000, na njedebe na mpaghara mgbanwe, akwụkwọ e si na ntutu na ihe dị n'ọmụmụ ihe mmụta
Mee ya ESRI nwere ike ịbụ $ 300,000, na njedebe nke na-ewu ụlọ na repositories, n'ihi na ihe ga-adị na nkwado nke ndị ọzọ ụdị; ọzọ karịa na ụzọ ọ pụrụ isi chọpụta na ikikere 10 chọrọ maka mgbatị nke bụ $ 9,000
Mee ya Ịnwere ike ibu $ 15,000, na njedebe nke usoro ihe owuwu ahụ, usoro mmụta na mkpa maka ndị mmepe nke mbụ (ọ bụ ezie na n'ọnọdụ ọ bụla enwere ọtụtụ ihe ịzụlite). M dokwara anya na e nwere ihe ngwọta ndị ọzọ dị ala, ma m na-eji nke a n'ihi na agbalịrị m ya n'oge na-adịbeghị anya, ọ na-eju m anya.
N'ọnọdụ kasị njọ m nwere $ 155,000 hapụrụ ịmụta ezigbo akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụrụ na m na-egwu egwu ikikere oge m nwere ike ịnwa ego onye ahịa.
Ọ na-adọrọ mmasị na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na enwere ike imezu ya software n'efu, dị ọcha GvSIG / Grass, Postgre, intelliCAD na ahịhịa ndị ọzọ ma ọ bụrụ na m jikwaa ịhazi otu sistemu nhazi, ndị mmepe mmepe na ntụkwasị obi iji ree ọrụ ahụ ... ọ bụrụ na onye ahịa ahụ tụlere $ 700,000 ... Enwere m ike ịkụ ya ike n'ihi na okenye ahụ ọnụọgụ ndị ọrụ nwere ike igosipụta sọftụwia na-akwụghị ụgwọ ma ọ bụ nke dị ọnụ ala.
Eke Egwuregwu arụ ọrụ Nchịkwa Akwụkwọ Ihe ndozi Intercambio
2 Raster Kere
+ mgbakwunye Navis Ọrụ? + Topobase mmepe n'ime ohia
Bentley Map 7 Benley
+ mapcript Ihe omuma ihe omuma mmm ... ka ekwuru
GIS Ngini Akwukwo
GIS Server GIS Server na nhazi ọzọ uuuuy
bara Mmepe nke mgbakwunye
Ihe ikikere 20 Universal Manifold Omenala EnterpriseOracle 10G Oge Ogologo Oge Nile Njiri oge kachasị Oge Ogologo Oge Nile
Na nchịkọta, enwere m olileanya na ị kpọtere ọchịchọ ịmata ihe maka ihe ngwọta n'efu na ọnụ ala, ọ bụ ezie na oge dị mkpụmkpụ iji gaa n'ihu. Anyị akọwala ọtụtụ nkwubi okwu nkenke:
Nkà na ụzụ dị mma bụ: "nke nwere ike ibu ubu"N'ime ihe omumu zuru ụwa ọnụ
Enweghi ike inwe uzuzu "mma maka ihe ọ bụla"
A ghaghị iche echiche "akụ na ụba" dịka "usoro ndụ nke teknụzụ"Na mmekọrịta ya
Ihe ederede (systematization) gbasaa usoro ndụ nke teknụzụ
Ọ bụghị ndị niile dị njikere maka ngwanrọ n'efu, iji malite ngwa dị mma "azụmahịa", Site na ahụmịhe ị nwere ike iche maka ngwa"ọnụ ala", with the audacity at"free"Ma ọ bụ" onwe "
Previous Post«Previous Ee ọ ga-ekwe omume igosipụta Google Earth ma lee ihe oyiyi site n'elu na ozugbo
Next Post Google abanye n'ime ụwaNext »
4 Azaghachi na "Nhọrọ maka ịhọrọ GIS / CAD ngwọta"
Oscar Sanchez kwuru, sị:
Enyi na ego ole ka ụgwọ a?
July, 2008 na
ọ bụrụ na oge ụfọdụ gara aga, egosiri m ụfọdụ ọnụahịa nyocha, echere m na ị pụtara otu n'ime post ndị a
trombone kwuru, sị:
Ndewo, Amaghị m ma m cheta nke ọma mana okpokoro ahụ na-akwụ ụgwọ dị iche iche, enwere m ya ogologo oge tupu ụbọchị ahụ apụta, amaghị m Ọ bụrụ na imelitela ya, ma ọ bụ na m hụ ya na ibe ọzọ